राम्रो नै हेरौं, हाम्रो मै हेरौं राम्रो नै हेरौं, हाम्रो मै हेरौं
राम्रो नै हेरौं, हाम्रो मै हेरौं
By:Maitri News Published Date: ३१ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १६:१० at ३१ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १६:१० Main News
काठमाडौँ । नेपालको सबै भन्दा पुरानो तथा ठूलो मिडिया कारोबार एजेन्सी मिडिया हब प्रा.लि., फिफा विश्व कप २०१८ को एक मात्र आधिकारीक टेलिभिजन प्रशारण साझेदार हो । चार ओटा नेपाली च्यानलहरु, नेपाल टेलिभिजन, कान्तिपुर एच.डि., डिशहोम एक्सन् स्पोर्टस् र एन.टि.भि. प्लसद्वारा फिफा विश्व कप म्याच प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ । मिडिया हब प्रा.लि. ले यो सुबिधा ‘राम्रो नै हेरौ, हाम्रो मै हेरौ’ भन्ने नाराको साथ प्रदान गरेको छ ।
फुटबलको उन्माद संसार भरी बढिरहेको यस समयमा फिफा विश्व कप २०१८ को नेपालमा आधिकारीक इजाजत प्राप्त मिडिया हब प्रा.लि. ले नेपाली फुटबल फ्यानहरुका लागि ४ नेपाली च्यानलहरुमा विश्व कप प्रसारण गर्नेछ । मिडिया हबले सधैं फिफा विश्व कपलाई नेपाली च्यानलहरुमा ल्याउन ठूलो योग्दान गर्दै आएको छ । यो बर्षको बिशेषता भने कान्तिपुर एच.डि. र डिशहोम एक्सन स्पोर्टस्मा एच.डि. क्वालिटि को प्रसारण हुने छ ।
यो प्रशारण तपाईं माझ प्रस्तुत गरेको छ, अर्घाखाँची सिमेन्टले साथमा रहेको छ बजाज पल्सर एन.एस. २००, कोका कोला र राईनो ५०० डि । साथै साझेदारी रहेको छ क्लियर, रेनो क्याप्चर, डिसहोम, नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, जुपिटर क्लासिकको । प्रसारणको समर्थन रहेको छ हिमस्टार एल.ई.डी बल्ब, एन.आई.सि. एसिया बैंक, सर्वो लुब्रिकेन्टस् र एसियन पेन्टस्को ।
यस पहलको बारेमा मिडिया हब प्रा.लि.का कार्यकारी निर्देशक श्रीमान सोम धितालले भन्नु भए, “लामो समय देखि फिफा विश्व कपको नेपालमा आधिकारीक इजाजत प्राप्त संस्था बन्न सकेकोमा हामी धेरै खुशी छांै । फिफा विश्व कप हेर्न विदेशी च्यानलहरुमा मात्रै निर्भर हुनुपर्ने समय अब गएको छ । अब नेपालीहरुले विश्व कप नेपाली एच.डि. च्यानलहरुमा नै प्रत्यक्ष हेर्न पाउने छन । हामीले हाम्रो दर्शकहरुको लागि निकालेको ‘राम्रो नै हेरौ, हाम्रो मै हेरौ’ भन्ने नारा हाम्रो पहलको लागि सबै भन्दा उपयुक्त रहेको छ ।” यसले नेपाली च्यानलहरुमा मात्र सीमित दर्शकहरुलाई पनि सुबिधा दिने छ ।